एमसीसी र प्रचण्डको कनेक्सन एमसीसी र प्रचण्डको कनेक्सन Canada Nepal
एमसीसी र प्रचण्डको कनेक्सन
बैशाख ७ २०७८
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । सम्झौता भएको चार वर्ष पुुग्न लाग्दा संसदबाट अनुमोदन नगरिएपछि यसले बेला बेलामा राजनीतिक बजार तताउने गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सो सम्झौता भएको थियो । २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाश सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै
सम्झौताअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि सो सम्झौतालाई संसद बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुुत गरिएन । यसै कारण राजनीति बजार तताउँदै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको हो । तर, अहिले सो सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गराउन प्रचण्डले तत्परता देखाउन सकेनन् । उल्टै प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नबाट रोकेको आरोप प्रचण्डमाथि छ । माओवादी केन्द्रका नेता प्रतिनिधि सभाका सभामुख बनेको र प्रचण्डको प्रभावमा सो प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको सरकारको बुझाइ छ ।
जब ओलीले प्रचण्ड र देउवाको योजनाको सुुइँको पाए...
एमसीसी सम्झौतापछि माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेका हुन् । तर, दुवैले बैठकमा प्रस्तुत गरेनन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरे सभामुख सापकोटामाथि कारबाही गर्ने धम्किसमेत दिए । सभामुखमाथि कारबाही भन्नाले महाअभियोग बुुझाउँछ । यद्यपि सोमबार नै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ ।
एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ
एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नखुलेका प्रचण्ड तत्काल एसमीसी अनुमोदन नगराउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगराउने मनस्थितिमा प्रचण्ड पुुगेका हुन् । उनी आफू सरकारको नेतृत्वमा पुुगेपछि एमसीसी पारित गरेर जस लिने सोचमा प्रचण्ड रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
आफ्नै सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गराउन निस्क्रिय बनेका प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट हुन चाहेका छैनन् । यद्यपि उनी एमसीसीको पक्षधर रहेकोमा भने द्विविधा छैन । तर, अहिले ओली सरकारको पालामा अनुमोदन गराउन नचाहेको भने देखिन्छ ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौताको विपक्षमा प्रचण्ड नैतिक रुपमा पनि हुन सक्दैनन् । र उनी एमसीसीको विपक्षमा नरहेको गत माघ २२ गते स्पष्ट भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत माघ २२ गते आमहड्ताल गरेको थियो । आमहड्तालको दिन प्रचण्ड पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए ।
एमसीसी प्रकरण : प्रतिरक्षामा प्रचण्ड
पुल्चोकमा सरकारविरुद्ध कार्यकर्ताले लगाएको नारामा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्वरमा स्वरमा मिलाएर नारा लगाएका थिए । सोही क्रममा कार्यकर्ताले एमसीसीबारे नारा लगाउन थाले । यसलाई प्रचण्डले रोक्ने प्रयास गरे । प्रचण्डले ‘प्रतिगमनविरुद्ध’ जस्ता नारा लगाउन इंगित गरेका थिए ।
एमसीसीबारे नारा लगाउन रोकियो । तर, केहीबेरमै उद्घोषकले ‘एमसीसी चाहिँदैन’ भन्ने नारा लगाउन थाले, अन्य नेता–कार्यकर्ताले समर्थन गरे । तर, प्रचण्ड भने शिर झुकाएर एमसीसीविरुद्ध नारा नलगाइकन पम्फा भुसालसहितका नेतासँग बिदा भएर हिँडे ।
यसपछि एमसीसीको पक्षधर रहेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भयो । जनतालाई एमसीसी मुलुकका लागि अहित रहेको आफ्ना नेताहरुलाई बोल्न लगाएका प्रचण्ड आफैँ भने त्यसविरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै आलोचना भयो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन्छ
यसपछि माघ २३ गते शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू एमसीसीबारे अन्तिम निर्णयमा नपुगेको बताएका छन्। बिहीबार आमहड्तालका क्रममा आफूले एमसीसीविरोधी नारा नलगाउन भनेको भन्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिले हामी गुण्डागर्दी शैलीमा भएको नियुक्तिको विरोधमा हो, बीचमा फ्याट्ट एमसीसी आयो। यो कसरी बीचमा घुस्यो भन्ने हो। यसको मतलब म एमसीसीको पक्षमा अथवा पुनर्विचार गरेको भन्ने होइन। मैले अमेरिकी राजदूतलाई पनि हामी पुनरावलोकनको पक्षमा छौं भनेको छु।’ आमनागरिक र शक्तिराष्ट्र दुवैलाई नचिढाउने गरी प्रचण्ड एमसीसीका सम्बन्धमा प्रतिरक्षा अवस्थामा पुगेका थिए । तर, त्यसयता प्रचण्ड एमसीसीबारे मौनता साँधेर बसेका छन् ।
शक्ति राष्ट्र चिढिँदै
एमसीसी पारित गराउन भूमिका नखेलेको भन्दै प्रचण्डसँग शक्ति राष्ट्र चिढिन थालेका छन् । आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन छाडेर उल्टै सदनमा प्रस्तुत हुनबाट रोकेको भन्ने आरोप खेपेका प्रचण्डसित अमेरिकासहित शक्ति राष्ट्र चिढिन थालेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाली राजनीति तताइरहने एमसीसी के हो ? सर्वत्र चासो र जिज्ञासा देखिन्छ । यस सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुमा आ–आफ्नै बुुझाइरहेको पाइन्छ । एमसीसीलाई कतिपयले इन्डोप्यासिफिकसँग जोडेर हेरेका छन् भने सम्बन्धित् पक्षले यसको खण्डन पनि गरेको छ ।
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी जुम्ल्याहा भवन ट्वीन टावर आक्रमणमा परेपछि विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको हो।
नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता, एजेण्डामा एमसीसी ?
एमसीसीको वेबसाइटकाअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।’
एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले लागूू भएको पाँच वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।
एमसीसी लागू भएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा असर गर्ने भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका केही नेतासहितले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नेपालमा अमेरिकी सैनिक आउनेदेखि नेपालको कानुन निस्क्रिय हुने र अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, सरकार र अमेरिकाले भने यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
बैशाख ७, २०७८ मंगलवार १६:५६:२७ बजे : प्रकाशित